Madaxweynaha Burundi oo diiday in doorashada Dalkiisa dib loo Dhigo – Radio Daljir
Madaxweynaha Burundi oo diiday in doorashada Dalkiisa dib loo Dhigo
Maajo 19, 2015 7:40 b 0
Talaado, May 19, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dalka Burundi, Pierre Nkurunziza ayaa ku gacan-saray inuu dib u dhigo Doorashooyinka Madaxnimo ee Dalkiisa ka dhici doona 26-ka bisha Juun ee 2015-ka, isagoo sheegay inuusan ka aargudan doono kooxihii ku lugta lahaa Af-gambigii dhicisoobay.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Burundi ayaa lagu sheegay in kooxihii ku lugta lahaa Af-gambigii dhicisoobay la horkeeni doono Sharciga, sida uu qabo dastuurka dalkaas, balse aanay jirin doonin wax aargudasho oo lagula kici doono.
Sidoo kale, Uhuru Kenyatta iyo Jacob Zuma ayaa ka dalbadaymada Nkurunziza inuu dib u dhigo Doorashooyinka Dalkiisa ka dhici doona, Lana qabto marka la Xalliyo Qul-quladaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan, Laakiinse Wuu ku Gacan-sayray Codsiyada kaga yimid madaxweynayaasha Kenya iyo Koonfur Afirka.
“Doorashooyinka burundi waxaa la qaban doonaa xilligii loo qorsheeyay oo ah 26-ka Juun ee sannadkan, dibna looma dhigi doono,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Burundi.
Magaalada Bujumbura ee dalka Kenya ayaa waxaa weli kasii saocda dibad-baxyadii looga soo Horjeeda inuu madaxweynaha dalkaas mar saddexaad isku sharraxo xilka madaxnimo ee dhici doona, taasoo ay ku tilmaameen sharci-darro.
Tiro Saraakiil iyo Askar ah ayaa loo xiray Af-gambigii Dhicisoobay ee Dalkaas ka dhacay Toddobaadkii hore, inkastoo Jen. Godefroid Niyombare oo Hoggaaminayay Af-gambigaas uu weli baxsad yahay.
“Nooma Qorsheysna inaan Wax Aar-goosi ah loo geysto Kooxihii In-qilaabkii Arbacadii dhacay dhacay ka dambeeyay,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Burundi maanta oo Talaado ah.
“Kooxihii ku lug lahaa isku-daygii Afgambi ee Guul-darreystay Sharciga ayaa la hor-geyn doonaan, Wixii uu sharcigu ka qaato ayaana la marin doonaa, balse ma jirto aargoosi gooni ah oo lagula kici doono,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Madaxweynaha dalka Burundi, Nkurunziza ayaa shalay shaqada ka eryay saddex wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisa, kuwaasoo uu ku jiro Wasiirkii Gaashaandhigga, Balse xafiiskiisa ayaa diiday in Shaqo ka cayrinta Wasiirradan ay ku Lug leedahay Af-gambigii Dalkiisa ka dhacay.
Ugu dambeyn, Hay’adda Qoxootiga Adduunka ee UNHCR ayaa sheegtay inay Dalkaas ka Qaxeen 105,000 oo qof, Tan iyo markii ay dalkaas ka billowdeen dibadbaxyo rabshadaha wata ee looga soo horjeedo madaxweynaha.
Mudaharaad looga soo Horjeedo Barlamaanka Soomaaliya oo ka dhacay Kismaayo